Jiro SPOT: MYANMAR / BURMA
Fanavaozana sy famakafakana ny toe-javatra, miaraka amin'ny Take Action sy ny vaovaon'ny Video, Media News, Maps ary ny tombana ny FoRB sy ny zon'olombelona.
Vakio ny vaovao, fanairana ary tatitra avy amin'ny Vaomiera amerikana momba ny fahalalahana ara-pinoana iraisam-pirenena (USCIRF).
Fanavaozana: Vaovao momba ny UN Forb
Mikaroha ny tranokalan'ny UN sy ny ReliefWeb raha mila vaovao sy tantara mifandraika amin'ny FoRB sy ny zon'olombelona.
CAMPAIGN SPOTLIGHT: MYANMAR
Amporisiho ny mpikambana ao amin'ny kaongresinao hanohana ny lalàna miantso ny governemanta amerikana iray manontolo sy ny valiny iraisam-pirenena hanafaka ireo mpitarika Burma voafonja ary hanohana ireo vondrona ara-pinoana sy ara-poko izay iharan'ny herisetra mitohy.
Mandraisa anjara amin'ny fampielezan-kevitray na mamorona anao manokana mba handrenesan'ireo mpanao politika any Washington sy manerantany ny tompon-daka amin'ny fahalalahana ara-pinoana sy finoana iraisam-pirenena.
STRATEGIASA & FAMPIANARANANA CAMPAIGN
Ity fizarana ity dia misy fitaovana hanamafisana ny fiantraikany amin'ny fanentanana sy ny fampielezan-kevitra. Ireo fitaovana fohy ireo dia mamaritra ny fomba fanao tsara indrindra ho an'ny paikady, fandefasan-kafatra, fanentanana ary fampiroboroboana ny olana.
Fitaovana fiasa amin'ny Internet
Eto ianao dia afaka miditra amin'ireo loharano sy sehatra ilainao hirotsahana amin'ny hetsika hetsika kendrena.
1) Fototra FoRB - LoharanoIreo loharanom-pahalalana ireo dia hanampy ireo liana amin'ny fahalalahana ara-pinoana iraisam-pirenena hahafantatra ny antony maha-zava-dehibe ny fiarahamonina sy ny zavatra azon'izy ireo atao mba hiarovana ny fahalalahana ara-pinoana sy ny finoana ho an'ny olona manerantany.
2) loharanom-pahalalana ho an'ny fiarahamonina finoanaIreo loharanom-pahalalana ireo dia hanampy ny mpitondra finoana ho tonga saina amin'ny sakantsakana misy ankehitriny amin'ny fahalalahana ara-pinoana iraisampirenena ary hiresaka ireo lohahevitra ao amin'ny fiarahamonin'izy ireo.
3) Loharano ho an'ny mpikaroka akademikaIreo loharanom-pahalalana ireo dia hanampy ny mpianatra hianatra momba ny fahalalahana ara-pivavahana sy ny fahafaha-manao ary ny fikambanana izay hanampy azy ireo hanao fanovana.
4) Loharano ho an'ny mpikatroka sy mpisolo vavaIreo loharanom-pahalalana ireo dia hanampy ny mpikatroka hahafantatra bebe kokoa sy hisolo vava ny fahalalahana ara-pinoana iraisam-pirenena ao amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, fanjakana, firenena ary iraisam-pirenena.
5) Harena ho an'ny tanora mpitarikaIreo loharanom-pahalalana ireo dia hanampy ny mpitarika tanora sy hianatra momba ny fahalalahana ara-pinoana iraisam-pirenena ary hahita fotoana sy fikambanana mety hanampy azy ireo hanao fanovana.
6) loharano ho an'ny mpiaro ara-dalànaIreo loharanom-pahalalana ireo dia hampitaovana ireo mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona amin'ny loharanom-pikarohana ara-dalàna sy ny fifandraisana amin'ny tambajotra mba hiarovana ny zon'ny rehetra.
7) Loharano ho an'ny mpanao politikaIreo loharanom-pahalalana ireo dia hanampy ny mpanao politika hamolavola politika sy tolo-kevitra hampandrosoana ny fahalalahana ara-pivavahana iraisam-pirenena.
Tsindrio ny sary etsy ambony raha te hiditra amin'ny tranomboky.
Mikaroha na zahao ny fitahirizam-boky fahalalana ho an'ny atiny multimedia sy loharano loharano nalamina tamin'ny sokajy sy ny marika meta.
Lalàna fivadiham-pinoana sy fitenenan-dratsy
Fisorohana ny famonoana olona sy ny fifandonana
IRF / FORB Fototra
Lalàna sy politika
Rafitra nasionaly sy fanadihadiana
Fanenjehana sy famoretana ara-pinoana
Ireo niharam-boina sy voafonja
Politika amerikana sy lalàna
Scorecard an'ny kaongresy amerikana
Manasongadina ny firaketana ny lisi-pifidianan'ny mpikambana ao amin'ny Antenimieran-doholona Amerikana sy ny Antenimieram-pirenena momba ny volavolan-dalàna, ny fanapahan-kevitra ary ny fanitsiana izay manohana ny fahalalahana ara-pivavahana iraisam-pirenena ...
Iza no misolo tena ahy amin'ny kongresy?
Ampiasao ny adiresinao na kitiho eo amin'ny sarintany hahitanao ireo Senatera sy solontena amerikana anao.
Hetsika mpanao lalàna ankehitriny sy ara-tantara --Mikaroha Kongresy.gov ary mizaha lalàna, hetsika ary mpilalao sarimihetsika mifandraika amin'ny IRF.
Senatera amerikana sy trano IRF firaketana fifidianana
Famerenana ny tsingerintaona faha-20 IRFA
Ity fitsingerenan'ny faha-20 taonan'ny lalàna IRF 1989 ity dia mamerina ny ezaka fiaraha-miasa izay nanampy tamin'ny fampidirana ny fahalalahana ara-pinoana iraisam-pirenena ao anatin'ny politika ivelany amerikanina.
Mikaroha lalàna, politika, kaody federaly, hetsika, tatitra sns sns an'ny governemanta amerikana: kongresy, sampana mpanatanteraka, tranombokin'ny kongresy, CRS, antenimieram-panjakana, fifanarahana sns.
FoRB avy amin'ny Firenena
Fahalalahana ara-pivavahana any Afrika amin'ny firenena
Fahalalahana ara-pivavahana any Azia isam-pirenena
Fahalalahana ara-pivavahana any Eropa isaky ny firenena
Fahalalahana ara-pivavahana any Amerika atsimo isam-pirenena
Fahalalahana ara-pivavahana amin'ny firenena
Mikaroha sy mizaha ny lalàm-panorenan'ny firenena 197 (ireo izay misy drafitra sy manan-kery) ary ampitahao ny fomba iarovany na fameperana ny FORB.
Vakio ny fifanarahana iraisam-pirenena sy ny fifanarahana mifandraika amin'ny FoRB sy ny zon'olombelona hafa.
Lahatsoratra fanadihadiana momba ny firenena
Ny lalàm-panorenan'izao tontolo izao
Toro-làlana manerantany momba ny vitsy an'isa sy ny vazimba teratany (tahiry azo fikarohana)
Vahoaka iharan'ny fandrahonana (Sarintany ifanakalozana)
Firenena USCIRF misy ahiahy manokana
FORB isam-pirenena (Wikipedia)
Lisitry ny tontolon'ny World Open Doors (2020)
Fahalalahana amin'ny Internet
Fahalalahana ara-pinoana Uyghur
Apôstazia sy fanevatevana
Fandripahana sy fifandonana
Gadra ny feon'ny fieritreretana
Fangaraharana momba ny fanabeazana
FAMPANDROSOANA FORB ROUNDTABLE
Fikarohana rohy sy tatitra momba ny fihodinana sy forum an'ny FoRB isam-paritra.
IRF TSY MISY FITIAVANA ONLINE
Mampiasa ny Zoom hampiantrano fivoriana fivoriana tsy tapaka ny International Round Freedom Freedom Roundtable. Amin'ity fizarana ity dia azonao atao ny manamboatra RSVP, mahazo Zoom, mahita fanampiana amin'ny fitifirana olana, ary miditra amin'ireo taratasy zaraina sy sidina amin'ity pejy ity.
TRANO FIVORIANA IRF (DC)
Kalandrie sy lisitry ny fizotran'ny fisehoan-javatra ho avy ho an'ny latabatra DC IRF Round.
Ity ivon-toerana fanentanana an-tserasera ity, feno fitaovana sy fampahalalam-baovao, dia azo ampiasaina amin'ny fiarovana sy ny fampandrosoana ny fahalalahana maneran-tany amin'ny fivavahana, finoana ary feon'ny fieritreretana.
Inona no mitranga ankehitriny
FANAMPIM-PANAZAVANA - MANAO ASA
Fanentanana amin'ny Kongresin'ny Coalition Burma
Lisitry ny hetsika IRF ho avy
Hetsika latabatra boribory IRF (DC)
Kitiho ny rohy raha te hidirana amin'ny loharano voarindra
Fototry ny fahalalahana ara-pivavahana: Ireo loharano ireo dia hanampy izay rehetra liana amin'ny fahalalahana ara-pivavahana iraisam-pirenena hianatra momba ny antony maha-zava-dehibe izany amin'ny fiaraha-monina sy ny zavatra azony atao mba hiarovana ny fahalalahana ara-pivavahana sy finoana ho an'ny olona manerana izao tontolo izao. Kitiho raha te hidirana amin'ireo tantara manerana izao tontolo izao, fomba ahafahanao mandray anjara, ary rohy hidirana amin'ny latabatra boribory sy hetsika. Miditra loharano
Fiaraha-monina finoana: Ireo loharanon-kevitra ireo dia hanampy ireo mpitarika ny finoana hahafantatra ireo sakana amin’izao fotoana izao amin’ny fahalalahana ara-pivavahana iraisam-pirenena sy hiresaka ireo lohahevitra ireo eo amin’ny fiaraha-monina misy azy ireo. Kitiho raha te hidirana amin'ny tantara, fampahalalana momba ny masoivohon'ny faritra izay miasa tsy an-kijanona amin'ny fampiroboroboana ny IRF, ary ireo loharanom-panompoana ho an'ny mpitarika hizara amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy. Miditra loharano
Mpikaroka akademika: Ireo loharano ireo dia hanampy ireo mpianatra hianatra momba ny fahalalahana ara-pivavahana iraisam-pirenena sy ireo fahafahana ary fikambanana izay hanampy azy ireo hitondra fiovana. Kitiho raha te hidirana amin'ny vaovao sy fampahalalana momba ny IRF, ny fahafahana manao internship, ny fikarohana akademika, ary ny maro hafa. Miditra loharano
Mpikatroka & Mpisolovava: Ireo loharano ireo dia hanampy ireo mpikatroka hahatakatra bebe kokoa sy hisolo tena ny fahalalahana ara-pivavahana iraisam-pirenena ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy eo an-toerana, fanjakana, nasionaly ary iraisam-pirenena. Kitiho raha te hahazo fampahalalana momba ny olana momba ny fahalalahana ara-pivavahana amin'izao fotoana izao manerana izao tontolo izao, ny fitaovana fanentanana, ny paikady taloha, ary ny fomba ahafahanao mamorona fanentanana manokana hampiroboroboana ny IRF. Miditra loharano
Mpitarika tanora: Ireo loharano ireo dia hanampy ireo mpitarika tanora sy hianatra momba ny fahalalahana ara-pivavahana iraisam-pirenena ary hahita fahafahana sy fikambanana izay hanampy azy ireo hitondra fiovana. Kitiho raha te hidirana amin'ny vaovao sy fampahalalana momba ny IRF, ny fahafahana manao internship, ny fikarohana akademika, ary ny maro hafa. Miditra loharano
Mpiaro ara-dalàna: Ireo loharanon-karena ireo dia hanome fitaovana ireo mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona amin'ny loharanom-pikarohana ara-dalàna sy fifandraisana amin'ny tambajotra mba hiarovana ny zo fototry ny rehetra. Kitiho raha te hiditra amin'ny fitaovana fikarohana an-tserasera, fanavaozana IRF, fampahalalana momba ny olana ankehitriny, ary tambajotra ara-dalàna. Miditra loharano
Mpanao politika: Ireo loharano ireo dia hanampy ireo mpanao politika hamolavola politika sy tolo-kevitra ho fampandrosoana ny fahalalahana ara-pivavahana iraisam-pirenena. Tsindrio raha hidirana amin'ny famakafakana, fanavaozana ny IRF, fampahalalana momba ny olana ankehitriny, ary ny fomba ahafahanao miditra amin'ny IRF amin'ny alàlan'ny lalàna sy ny fisoloana vava. Miditra loharano
Mianara bebe kokoa momba ireo olana mifandraika amin'ny fahalalahan'ny fivavahana sy finoana (ForRB).
Miomana & mampiofana
Fomba fanao tsara indrindra ho an'ny fanentanana sy fanentanana.
Miomàna ho amin'ny hetsika
Manentana sy mitarika fanovana ho an'ireo marefo sy voageja. Mamorona na manatevin-daharana fanentanana.
Miara-miasa ho an'ny fahamendrehan'ny rehetra
Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka
Ivotoerana momba ny fahalalahana an-tserasera
Manome / manohana ny Ivotoerana Fahafahana
Copyright © 2021 21Wilberforce | politika fiarovana fiainan'olona | Fepetra fampiasana | Namboarin'i iCatalyst CKS